Ukumomotheka okumhlophe okweqhwa kuye kwacatshangwa kubonakala kukhangayo. Ukudla okunempilo, imikhuba emibi nokuntuleka kwengqondo efanele kuthinta umbala we-koqweqwe lwawo. Izakhi zofuzo nazo ziyindaba. Abanye abantu akudingeki nje baxhaphaze amazinyo abo njengoba bephuzi. Kwabanye uhlobo lwemvelo lunikeze umbala omhlophe wemvelo we- koqweqwe lwawo. Intuthuko yobuchwepheshe ayimi. Namuhla, kunezindlela eziningi zokucwilisa amazinyo akho. Ezinye izindlela zingasetshenziswa ekhaya.
Ukumomotheka okuphelele abantu abafisa kusukela ezikhathini zasendulo. Ngisho ngaleso sikhathi, lapho umqondo wokuthi "amazinyo" awakhona, kwakusetshenziswa izindlela ezenza ukuba amazinyo abukeke nakakhulu. Izindlela zokuthuthukisa ukumomotheka, kwakungaphephile ngaso sonke isikhathi. Ukucacisa amazinyo okwesikhashana, abantu bathola izinkinga eziningi zempilo.
Kuze kube yilolu suku, ubufakazi bezincwadi zakudala bezigcinile, ezichaza izindlela ezihlukahlukene zokukhanyisa amazinyo. AmaGibhithe lasendulo, ukuze afinyelele ubumhlophe beparele, koqweqwe lwawo lwe-koqweqwe lwawo olukhishwe nge-anyanisi asanda kuthathwa. Le ndlela yakusiza ngempela ukwenza ukumomotheka kube mnandi kakhulu. Kodwa ukuphefumula kwashiya okuningi okufisa ukufunwa. AbaseGibithe abanjalo basebenzisa ipumice, bagxila eviniga iwayini. Amazinyo aqala ukukhanya ngamaqhinga ambalwa nje. Kodwa le ndlela yayinobudlova kakhulu. I-koqweqwe lwawo isula ngokushesha, amazinyo aqala ukuzwela.
Esikhathini esiphakathi, ama-knights nabesifazane babebukele ubuhle babo. Okuthakazelisayo yiqiniso lokuthi abakwa-barbers baphendule amazinyo ukugcoba. Esikhathini esitolo se-barber, awukwazanga kuphela ukucheba intshebe yakho noma wenze i-hairstyle enhle, kodwa futhi ungcwelise i-koqweqwe lwawo. Ochwepheshe e-arsenal of specialists kwakuyi-nitric acid. Umomotheka waba mnandi kakhulu. Kodwa indlela yokugcoba amazinyo akho ngaphandle kokulimaza, abakwa-barbers babengazi ngaleso sikhathi. Ukusetshenziswa kwe-asidi okuqhubekayo kwaholela ekukhuliseni kwe-koqweqwe lwawo. Amazinyo abonakalisiwe masinyane amnyama futhi awa.
Esikhathini sekhulu le-XIX isakhi esisisekelo sabo bonke ama-agent wokugaya amanzi sabonakala njenge-hydrogen peroxide. Ngo-1892, i-rinse yokuqala ephephile yenziwa ngokusekelwe. Lesi sici singasetshenziswa kokubili abadala nabantwana. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi i- hydrogen peroxide ayithinti nje kuphela umbala we-koqweqwe lwawo, kodwa futhi isebenza njenge-antiseptic. Abantu ababenenkinga ngezinsini bakwazi ukukhipha ngokushesha ukuvuvukala ngosizo lwe-rinse. Inqubo yokubola kwezinyo yancipha.
Kanjani izinto namuhla?
Intuthuko yobuchwepheshe iye yahamba kakhulu. Namuhla, kunezindlela eziningi eziphephile ezikuvumela ukuba wenze ukumomotheka ngokushesha. Ezinye izindlela zingasetshenziswa kuphela kumazinyo ochwepheshe wamazinyo, ezinye zitholakala ekhaya. Ochwepheshe bacebisa ukuthi bangaqala ukuphuma nge-bleaching ngaphandle kokubonisana kuqala. Umuntu angabangela ukulimala okukhulu empilweni yakhe. Umphumela wezinqubo zokuzithokozisa akuyona ukumamatheka okumnandi, kodwa u-koqweqwe lwawo oluqothulwayo futhi uchitheka.
Amazinyo agcoba amazinyo aqala namhlanje ngokuqedwa kokuqala kwezinkinga ezikhona. Uchwepheshe uphulukisa izinsika nazo zonke izinqubo zokuvuvukala emgodini womlomo. Ngisho namadivaysi e-bleaching home ayithandeki ukusebenzisa ngaphandle kokuhlolwa kokuqala kwedokotela. Inkinga yukuthi inqubo ingaba nokuphikisana okuthile. Kuyinto engathandeki ukugcoba amazinyo kubantu abane-periodontitis, koqweqwe lwawo lwama-koqweqwe obukhulu, abamba amazinyo angaphambili. Kungase kube nezinkinga nge-bleaching kubantu abagqoka amabhande. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukucacisa koqweqwe lwawo kungumgomo we-cosmetology kuphela, ngaphandle kwalokho ongakwenza ngaphandle. Kodwa ukuqaliswa okungenasisekelo kwalo kungabangela izinkinga ezinkulu emgodini womlomo.
Izindlela zangasese zamazinyo zokugcoba
Izindlela ezithandwa kakhulu, ezisetshenziswa ekhaya ukuthuthukisa ukumomotheka, ziyizinsini ezikhethekile zokuhlafuna. Isisekelo senqubo yisimiso sokuqeda. Ukunyamala koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo kukhishwa yizinhlayiya ezincane eziqinile, ezikhona kwi-chewing gum. Kubalulekile ukuphawula ukuthi odokotela bamazinyo emhlabeni bayangabaza ngale ndlela. Ama-cuds angasusa kuphela izindawo ezintsha ezivela emva kokudla ikhofi, iwayini elibomvu netiyi. Uma i-koqweqwe lwawo igugile esikhathini eside esidlule, akunakwenzeka ukuthi iyobekwa nge-chewing gum.
Ekhaya, ama-toothpastes akhethekile we-bleach koqweqwe lwawo angasetshenziswa. Izindlela ezinjalo zinikeza imiphumela emihle uma usebenzisa njalo. Kudingekile ukuba ushintshe izindlela ezijwayelekile zokuhlanzeka, njengoba amazinyo eba mnyama futhi. Umphumela ohlala njalo unikezwa umuthi wezinyosi "Isiphambano". Kodwa izindleko zayo ziphakeme kakhulu. Ithebhu eyodwa izokhokha ama-ruble angu-350.
Ukuphumelela kangcono amaqoqo akhethekile nama-gel, abasebenzisa inkambo yamaviki ambalwa. Isisekelo senzozindlela ezinjalo yindlela yokusabela kwamakhemikhali. Amakhemikhali ahlukahlukene asabela ngezingulube, aziqede ngokuphelele. Uma umuntu ezoqapha kahle umlomo womlomo, futhi ugweme ukusetshenziswa kwemikhiqizo eyingozi, ukumamatheka okumhlophe kweqhwa kuzogcinwa isikhathi eside. Okuthandwa kakhulu namuhla yiziqephu ezibomvu zeCrest 3D White. Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi ungakwazi ukuthola imiphumela emihle kakhulu ngemva kwamasonto ambalwa okusebenzisa umkhiqizo.
Amazinyo aqeqeshiwe avunguza
Izinqubo zokumhlophe zingenziwa emitholampilo yamazinyo emishini ekhethekile. Lapho ukhetha udokotela, kufanelekile ukubonana nodokotela abaningana. Inkinga ukuthi imitholampilo eminingi izama ukuheha amakhasimende ngezinqubo ezibiza kakhulu, ukubeka eceleni ukuphepha. Umuntu kufanele aqiniseke ukuthi akanakho ukuphikisana kwamazinyo ekukhanyeni emtholampilo.
Abantu abanamazinyo amhlophe amhlophe ngokwemvelo, kwanele nje ukuba baqhubekele inqubo ye-bleaching mechanical, evumela ukuthi kususwe izindawo ezimnyama kusuka ekhofi, intuthu kagwayi kanye newayini elibomvu. Buyisa umthunzi wemvelo we-koqweqwe lwawo kungenzeka ngamasu ambalwa nje. Ngosizo lwemishini ekhethekile, amazinyo ahlanzwa ngaphansi kwe-jet yesisombululo. Okokuqala, i-plaque nama-bacteria asusiwe. Okunye okuvela ebusweni be-koqweqwe lwawo kususwa amabala, avela ngenxa yokunakekelwa okungalungile komgqa womlomo.
Enye yezindlela ezinobumnene kakhulu ukukhanya kwe-ultrasound. Inqubo yenzeka ngaphandle komthelela ku-koqweqwe lwawo lwamazinyo. Ngosizo lwedivaysi ekhethekile, hhayi kuphela i-plaque, kodwa futhi i-tartar, engakwazi ukulahlwa iminyaka eminingi, ingasuswa. I-Ultrasound ayanele ukuhlanza amazinyo. Inqubo yokugaya iqhubeka ekhaya. Udokotela anganikeza umuthi wokugcoba wokugcoba okhethekile, okwenzela nje ukumomotheka okweqhwa, kodwa futhi kuvimbela ukukhanya koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo esikhathini esizayo. Imiphumela emihle nayo inikezwa amaqabunga e-white whitening. Zivame ukusetshenziselwa emva kwenqubo ye-ultrasound.
Ukwenyuka kwamazinyo kwamazinyo
Lena enye yezindlela ezivame kakhulu zokugcoba, ezisetshenziselwa ubuchwepheshe bamazinyo obuchwepheshe. Yasebenzisa izinto ezisebenzayo ezifanayo njengokungena kwe-home. Kodwa ukugxila kwabo izikhathi eziningana eziphakeme. Ngokuvamile, ukukhipha ubumnyama ku-koqweqwe lwawo, izinto ezifana ne-urea peroxide, i-chloride, i-hydrogen peroxide isetshenziswa. Umphumela wenqubo ungabonakala ngemuva kweseshini yokuqala. Ngesikhathi esifanayo, amazinyo agcoba ekuboniseni ekhaya aveza umkhuba omuhle kuphela ngemuva kwesonto lokusetshenziswa okuvamile.
Ukusuka kwamakhemikhali kubandakanya ukungena okujulile kwezinto ezisebenzayo ku-koqweqwe lwawo. Ngenxa yalokhu kungenzeka ukuthola umphumela ohlala isikhathi eside ngokwanele. Umomotheka omuhle uhlala iminyaka eminingana. Esikhathini esizayo, inqubo ingabuyekezwa. Ukuze ugcine isikhathi eside se-snow-white-white, ungasebenzisa ngaphezu kwalokho ukusebenzisa ama-bleach strips of Crest 3D White. Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi izixazululo ezinjalo zisiza ekwandiseni umphumela omuhle wenqubo yamakhemikhali izikhathi ezingu- 2-3 .
Ngeshwa, amazinyo agcoba ngendlela yamakhemikhali akubonakali kuwo wonke umuntu. Isimo esibalulekile ukungabi khona kwamazinyo angaphambili ama-veneers, ama-prostheses, izimpindi nezikhonkwane. Izinto zangaphandle zingasabela ngendlela engalindelekile emiphumeleni yamakhemikhali. Ngcono kakhulu, isiguli sizothola umbala onozinyo omubi, ngokushisa kakhulu. Uma ukholwa ochwepheshe, i-bleach ene-laser ilungele kakhulu abantu abanezifesheni.
Amazinyo e-Laser agcoba
Indlela ephumelelayo, evumela ukukhomba ukuthi izicubu zinozinyo. Kufanele kuqaphele ukuthi i-laser ayikeki kancane. Kanye nalokhu, kungenzeka ukuthi usebenze nezindawo eziyinkimbinkimbi kakhulu ngaphandle kokuphazamisa yonke indawo yezinyo. I-laser ifinyelela ngaphakathi ngaphakathi koqweqwe lwawo futhi isusa unomphela i-pigment eguqula umbala wezinyo. Udokotela wamazinyo usebenza emsebenzini wokugqoka, ukushintsha amandla omphumela ezingxenyeni ezihlukahlukene ze-koqweqwe lwawo.
Amazinyo okugcoba ama-laser aqala ngokusebenzisa ukwakhiwa kwamakhemikhali okhethekile phezulu koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo, okuvumela ukukhipha ukungcola ezingeni le-molecular. Ukusebenzisa i-laser, ungathuthukisa ukumomotheka ngokushesha ngangokunokwenzeka. Esikhathini esisodwa nje, kungenzeka ukuba uchithe amanzi ebusweni be-koqweqwe lwawo amathoni amaningana. Umphumela omuhle iminyaka engu-5-7. Isidingo sokuvakashela udokotela wamazinyo ngezinjongo zezimonyo ziyophela ngokuphelele uma usebenzisa futhi ama-bleaching strips e-Crest 3D White. Ngikhombisa ukuthi lezo zimali zisiza ukugcina kakhulu. Phela, asikho isidingo sokuvakashela isazi ngokuvamile.
I-Laser ivolisa ingenye yezindleko ezibiza kakhulu. Ngaphambi kwenqubo, isiguli kufanele silethe umlomo ngomlomo. Udokotela uhlola ukuthi ngabe zonke izimpawu zikhona yini, kungakhathaliseki ukuthi kunesidingo sokubeka amazinyo. Ukuba khona kwenqubo yokuvuvukala emlonyeni kungabangela umphumela ongalindelekile. Abantu asebevele baqhuba inqubo yokugaya i-laser bayelulekwa ukuba basebenzise kuphela ochwepheshe abaqinisekisiwe abanolwazi olunzulu. Ukusetshenziswa okungalungile kwelaser kungalimaza izinsini.
Izindleko zokususa i-plaque emtholampilo wamazinyo zihlala zihlaba umxhwele. Akuwona wonke umuntu ongakwazi ukukhokhela inqubo ye-cosmetology yalolu hlobo. Okudumile manje kuqale ukusebenzisa imichilo ekhethekile yokugcoba, engabizi futhi umphumela omuhle. Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi umphumela wokuqala ungabonwa ngemuva kwesonto lokusebenzisa ikhambi. Okuthandwa kakhulu namuhla yizingxenye zeCrest 3D White. Imiyalo yokusetshenziswa ichaza ngokuningiliziwe ukuthi ungayisebenzisa kanjani umkhiqizo ekhaya.
Imidwebo ye-bleaching yizingcezu ezincane ze-polyethylene, egcwele ingxube ekhethekile yokuhlukanisa amabala okugcoba kanye ne-plaque. Sebenzisa idivayisi enjalo ngokuqapha. Inkinga ukuthi i-hydrogen peroxide, eyisakhi esiyinhloko sesisombululo esimhlophe, ingabangela ukuzwela okukhulu kwamazinyo noma ukucasuka kwezinsini. Uma inqubo yokuvuvukala eyenzeka emgodini womlomo, kungcono ukungasebenzisi ama-Crest 3D Whitening strips. Ukubuyekeza kubonisa ukuthi isifo se-mucosa singashuba kakhulu.
Kunezinhlobo eziningana zezingqimba zokumhlophe. Okuthandwa kakhulu kufanele kubhekwe ngokuningiliziwe. Cishe zonke izinhlobo zinezinto ezifanayo. Ijel ekhanyayo inezici ezinjengamanzi, i-glycerin, i-hydrogen peroxide, i-saccharin ye-sodium, ne-sodium hydroxide. Umcabango ngokwawo wenziwa nge-polyethylene ekhethekile ephezulu. I-agent ekhanyayo ayithuthukisi nje kuphela umbala we-koqweqwe lwawo, kodwa futhi ivimbela ukuqoqwa kwe-plaque, futhi iyanciphisa izinga le-asidi.
I-Crest 3D White Glamorous White
Leli thuluzi likuvumela ukuba wenze amazinyo akho amhlophe ngamathoni amathathu. Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi umphumela omuhle ungatholakala ngemva kwamasonto amabili ukusetshenziselwa imivimbo njalo. Ngesikhathi esifanayo, imiphumela yokuqala iyabonakala ezinsukwini ezimbalwa. Leli gumbi elikhethekile nokho liphephile, kodwa abantu abanenkinga ngezinsini, kusukela ekusetshenzisweni kwe-agent ye-bleaching kungcono ukwenqaba. Ukuvuvukala kungadala. Kuyinto engathandeki ukusebenzisa imichilo isikhathi esingaphezu kwamasonto amathathu ngokuqhubekayo. Ngemva kokufinyelela umphumela omkhulu, i-Crest 3D White Whitestrips ingasetshenziswa njalo ezinsukwini ezimbalwa ukuze igcine umphumela.
Umkhiqizo unomumo okhethekile wokunamathela. Ngesizo salo, amaqabunga adonsa kangcono amazinyo. Iqiniso liwukuthi kumele lisetshenziswe nsuku zonke amasonto amabili imizuzu engama-30. Phakathi nenqubo, ungakwazi ukuphuza amanzi, ukugeza noma ukwenza noma yimiphi imisebenzi yansuku zonke. Amazinyo ahlala e-bleach unyaka wonke. Ngemva kwesikhashana, ungakwazi ukucubungula ukumomotheka kwakho amathoni ambalwa. Intengo yesethi ye-Crest 3D White Whitestrips i-Glamorous White ingama-ruble angu-4000.
3d Professional Professional
Lezi ziqeshana zenza kube lula ukukhanyisa amazinyo ngamathani angu-4. Sebenzisa ikhambi imizuzu engu-30 nsuku zonke amasonto amathathu. Ngemva kwesikhashana, inkambo ingabuyekezwa. Kodwa akuyona efiselekayo ukusebenzisa imichilo isikhathi esingaphezulu kwenyanga. Lokhu kungaholela ekucaseni izinsini nokuzwela koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo. Naphezu kokuthi i-Crest 3D White Professional inekwakhiwa lokunciphisa, kubalulekile ukugcina izinyathelo zokuphepha. Ochwepheshe bacebisa ukutadisha ngokucophelela imiyalo ngaphambi kokuqala inqubo ye-bleaching.
Uma ukholwa ukubuyekezwa, imiphumela yokuqala ingaqaphela emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu usebenzisa ithuluzi. Okokuqala, amazinyo agcotshwa ngethoni eyodwa. Ukufakwa kwe-3D White Professional kuphelele kulabo asebevele bavele ngenqubo futhi banquma ukubuyela kumphumela wangaphambilini. Abaqalayo kuyodingeka basebenzise ithuluzi isikhathi eside ukuze bafeze umphumela oyifunayo. Ngaphambi kokusebenzisa amaqabunga amhlophe, kungcono ukuxhumana nodokotela wamazinyo.
I-3D White Luxe
Loluhlobo lwezimpapho ezikhanyayo zathengiswa kuphela ngo-2014. Ekhaya, wonke umuntu angathuthukisa umbala we-koqweqwe lwawo ngamathani angu-6. Lokhu kungalinganiswa nenqubo yokugcoba emtholampilo wamazinyo. Labo abaye bakwazi ukusebenzisa inothi lokulungisa elinjalo ukuthi amathoni amaningana i-koqweqwe lwawo lenziwe lula ngosuku olulandelayo. Umthelela omkhulu ungatholakala emavikini amabili. Sebenzisa imikhakha yeCrest 3D White Luxe nsuku zonke imizuzu engu-60.
Izicucu ezincane ngenxenye yokucacisa zinomumo okhethekile. Lokhu kukuvumela ukuba uthuthukise kahle umbala we-koqweqwe lwawo ngaphandle kokulimaza izinsini. "Phambuka" - ukugqothula, okuphephile futhi kuthatha uhlobo lwamazinyo. Umuntu ngokuvamile akazwa sengathi kukhona into yangaphandle emgodini womlomo. Umphumela wesicelo uqhubeka unyaka. Ngemva kwesikhashana, inkambo ingabuyekezwa ukuze ifinyelele imiphumela engcono kakhulu. Izindleko zeqoqo lokuqothula ama-ruble angu-4800.
Ungasebenzisa kanjani amabhande ngokulungile?
Half umphumela yimpumelelo kuxhomeke ekutheni ukufunde kahle kangakanani ithuluzi sizosetshenziswa ekhaya. Mhlophe inqubo kuyinto efiselekayo yentiwe emalanga onkhe ngesikhathi esifanayo. Lokhu arcade kwenziwa kusihlwa ngaphambi sokulala. Isinyathelo sokuqala ukuba sifeze nempilo efanele ngomlomo. Kumele isetshenziswe kuphela isixubho, kodwa futhi uxubha nochungechunge. ngobunono Kwamakhorali gel strip ehlukanisiwe substrate esobala futhi isetshenziswa amazinyo. Kungcono ukusebenzisa izindlela umi phambi kwesibuko. I luthe ukuqina strip ngeke banamathele amazinyo, ngokushesha uzobona umphumela mhlophe. Polyethylene ophumile onqenqemeni zinsale.
Abantu ngamazinyo ebucayi iwukuba abanamathela ezinye izincomo. Ukuxubha amazinyo kufanele kube amahora ambalwa ngaphambi kokuthi inqubo. I gel uhlala ngalo ingaphakathi ngomlomo, kubalulekile ukugeza off ngamanzi plain. Ngaphezu kwalokho, kufanele zisetshenziselwe ukuqinisa nokunamathisela koqweqwe lwawo. Uma unezinkinga ngamazinyo akho, umdweshu kuyinto efiselekayo ukusebenzisa ngesikhathi sasemini. Ungenza inqubo Njalo ngemva kosuku olulodwa. Kubantu ngamazinyo sensitive kukhona emapheshana ekhethekile Crest 3D White. Intengo yabo ruble mayelana 3,500. emapheshana ezicacile uvumele mhlophe koqweqwe lwawo ku 1-2 Bala badlali labasenkhundleni. Lolu khetho angasetshenziswa ukuze silondoloze umphumela.
Mhlophe emapheshana ngisho inikeza nomphumela omuhle ngentengo ephansi, kufanele isetshenziswe ngemva kokukhuluma nodokotela. Kuphela udokotela wamazinyo ongamtshela onjani imali engcono esetshenziswa ekhaya.
Odokotela bamazinyo-odokotela - abayikuphi lokhu?
Ukumomotheka kwe-Hollywood, noma Indlela yokugcoba amazinyo akho ekhaya
Izikebhe ku Valaam. Bhalamu: ikhadi. Cruise ukuze Valaam
Lens Toric - indlela esigqoka ngayo? Lens for astigmatism
Eye ukuma ukwakheka
Intro Youtube channel: indlela yokwenza bebodwa
Imbali Wreath: Ukrainian uphawu kazwelonke futhi ngendlela uyokhanga abafana